LG Ray tonga miaraka amin'ny tanjona napetraka amin'ny tsena 3G | Androidsis
Na dia mbola banga aza ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana misy eo an-tanàn-dehibe sy any ambanivohitra, amin'ny firenena maro dia 3G no mbola normal ary hitan'izy ireo fa nofy ny 4G. Zavatra mitovy amin'ny zavatra tsapan'ny ankamaroan'ny mpampiasa izay tsy mipetraka amin'ireo tanàna lehibe eto amin'ny firenentsika ireo, isaky ny mihaino na mamaky izy ireo ny hafainganam-pandehan'ireo namanao, mirona handroaka demony arivo amin'ny vavany manozona ny mpiasan'izy ireo izy ireo. Satria fantatry ny mpanamboatra sasany izany, farafaharatsiny any amin'ny firenena sasany, dia mirona handefa fitaovana ao an-toerana izy ireo amin'ny fomba iray hanalavirana ny fanohanan'ny 4G ary hifantoka amin'ny hafainganana 3G.
Izany no tranga nambaran'ny LG androany ary fantatra amin'ny hoe LG Ray. Telefaona iray izay ao anaty fitaovany mahita toetra tsara tena tsara isika toy ny octa-core processeur, fakan-tsary avo lenta ary famolavolana miloka amin'ny metaly. Fantsona iray amin'ny vidiny mirary izay hanandrana ho iray amin'ireo lalandava amin'ireo firenena ireo izay mazàna ny hafainganana 3G dia mandeha ara-dalàna ary mandeha tanteraka izy ireo, mandritra ny fotoana fohy, avy amin'ny fananana fantsona manolotra fanampiana 4G nefa tsy afaka mieritreritra momba azy akory izy ireo. Fantsona iray izay amin'ny fanovana dia mahatratra 232 dolara na 215 euro, ka andao hofantarina izay nomanin'ity mpanamboatra Koreana ity amin'ity indray mitoraka ity.
1 Ny zava-dehibe amin'ny telefaona
2 Inona no mampihemotra azy
Ny zava-dehibe amin'ny telefaona
Manomboka amin'ny lafy tsarany, ny LG Ray dia miaraka amina fakantsary ho an'ny selfies miaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny MP 8 eo aloha mankany amin'ny MP 13 any aoriana. Fangaro mitambatra amin'ny solosaina fakan-tsary hanararaotra an'ity fanampin-tsakafo vaovao avy any Korea Atsimo ity.
Ao amin'ny faritra anatiny, izay ahitantsika ny processeur dia manana a octa-core Chip MediaTek MT6592M amin'ny 1.4 GHz, ny fahafahan'ny Dual SIM ary inona ny batterie 3.000 mAh azo takaloina ho an'ny iray hafa raha hitantsika fa ilaina izany. Amin'ny lafiny rindrambaiko dia miaraka amin'ny Android 5.1 Lollipop sy ny fisafidianana endri-javatra efa hita ao amin'ny andiany G, ao anatin'izany ny Knock Code sy Gesture Shot amin'ny fakantsary.
Inona no mampihemotra azy
Ny terminal tsy tonga lafatra, satria, raha manana SoC valo fototra ianao, ny RAM misy 1GB dia tsy miaraka aminao amin'io lafiny io. Ny teboka malemy iray hafa dia ny GPU, Mali 400, izay tsy mifanaraka amin'ny finday izay heverina fa eo amin'ny elanelam-potoana. Araka ny efa voalaza, miatrika telefaona tsy manome fanohanana ireo tambajotra 4G izahay, noho izany dia mazava be ny faritra misy ny planeta itondrana azy, ny sasany izay ny 3G no mitohy ho teknolojia manjaka.
Ny iray hafa aminy teboka ratsy dia eo amin'ny famahana ny efijeryAmin'ny maha 5,5 santimetatra ny habeny dia latsaka ny 720p. Izany dia afaka manakana anao tsy hanana traikefa tena tsara rehefa mihinana atiny multimedia, hahafahantsika mamela azy io ho toy ny terminal izay maka sary tsara, manana bateria tsara ary hamela ny mpampiasa hametraka karazana fampiharana rehetra. Raha efa te hankafy ireo lalao video tsara indrindra ianao toy ny dwarf na milalao andian-dahatsoratra dia tsy hahatratra ny ambaratonga antonony efa nahazatra antsika ankehitriny.
Fampisehoana HD 5,5 inch (1280 x 720, 267ppi)
Octa-core Mediatek MT6592M 1.4 GHz puce
1 GB an'ny RAM
16 GB fitehirizana anatiny miaraka amin'ny fanohanana micro SD
Fakan-tsary 13 MP aoriana misy flash, Gesture Shot
Tambajotra: HSPA + 21 Mbps (3G)
Refy: 152,5 x 76,4 x 9,3 mm
Milanja: 158 grama
Hita amin'ny volamena, volafotsy ary mainty
Ny vidiny voalaza etsy ambony dia manomboka amin'ny rubles 15.000, izay amin'ny taha-bola dia 232 $ na 215 €. Smartphone iray izay araho ny tsipika famolavolana avy amin'ny sisa LGs miaraka amin'ny lantom-peony ao aorina izay manome azy endrika vy hita maso.
Na dia tsy mahalala na inona na inona momba ny fisian'izany aza isika dia afaka manantena izany havoaka ny kinova iraisampirenena miaraka amin'ny fanohanana 4G, na dia tsy misy afa-tsy ny fiheverana azy ireo. Ny hananantsika dia a vaovao G3 Flex.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG dia nanambara ny LG Ray amin'ny efijery 5,5-inch ary mifantoka amin'ny tsena 3G
Tafaporitsaka ny Honor Play 5X